ဤအက်ပလီကေးရှင်း ၂၅ သည်သင်၏ Facebook ၀ င်ရောက်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားများကိုခိုးယူသည် Androidsis
သင်၏မိုဘိုင်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားသည့်အရာများ၊ သင်သည်ဤအန်းဒရွိုက်အက်ပလီကေးရှင်း ၂၅ ခုကိုတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည် သင်၏ Facebook တွင်သင်၏ ၀ င်ရောက်မှုအထောက်အထားများကိုသူတို့ခိုးယူသွားသောကြောင့်သူတို့ကိုသင်ယခုဖျက်ပစ်နိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင်ပဲ ဤအပလီကေးရှင်း ၂၅ ခုကို Google Play စတိုးမှဖယ်ရှားပေးသော Google ပြင်သစ်ဆိုက်ဘာလုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Evlina ကဖေ့စ်ဘွတ်ခ်တွင် malware ပါနေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် ဒါကြောင့်သင်ကဒီဆော့ဖ်ဝဲများကိုသူတို့တပ်ဆင်ထားခြင်းမရှိဘူးဆိုတာအတည်ပြုဖို့ဒီ app တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည်။
1 အန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်း ၂၅ လုံးရဲ့စာရင်းအပြည့်အစုံ
အန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်း ၂၅ လုံးရဲ့စာရင်းအပြည့်အစုံ
ဒီ application များ၏စာရင်း လက်နှိပ်ဓာတ်မီး, pedometer, image editor များပါဝင်သည် ပြီးတော့နောက်ထပ်အများကြီးပဲ။ ပထမတစ်ချက်မှာသူတို့လုံးဝအန္တရာယ်မပေးဟုထင်ရသော်လည်းသူတို့၏အတွင်းပိုင်းကုဒ်တွင် Facebook login အချက်အလက်များကိုခိုးယူသော malware ကိုတွေ့ရှိရသည်။
အလုပ်လုပ်ပုံ ဒီအန္တရာယ်ရှိတဲ့အက်ပလီကေးရှင်းတွေထဲကတစ်ခုက Facebook အက်ပလီကေးရှင်းပွင့်နေတယ်ဆိုတာစစ်ဆေးဖို့ပါ နောက်ခံရှိဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာအတုနှင့်အတူနောက်သို့ပွင့်လာသည့်အက်ပ် ၀ င်းဒိုးတွင်လမ်းညွှန်ခလုတ်ကိုထည့်ပါ၊ သင်၏အကောင့်အမည်နှင့်စကားဝှက်အားဖြင့်သင်၏အထောက်အထားများကိုရိုက်ထည့်ရန်သတိပေးသည်။
La စာမျက်နှာအတုသည်အကောင့်ကိုကူးယူရန်တာဝန်ရှိသည် ဝေးလံသောဆာဗာသို့ပို့ရန်စကားဝှက်။ ဤသည်မှာ Facebook malware ပါသည့်အက်ပလီကေးရှင်း ၂၅ ခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။
စူပါနောက်ခံပုံလက်နှိပ်ဓာတ်မီး com.wallpaper ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာ 500.000 23 2019 ဇူလိုင်လ
padenatef com.sun.newjbq.beijing.ten 500.000 မတ်လ 24 2020
နောက်ခံပုံအဆင့် com.liapp.level 100.000 ဧပြီလ 22 2019
ပုံအဆင့်နောက်ခံပုံများ com.communication.walllevel 100.000 ဧပြီလ 28 2019
iPlayer & iWallpaper com.ldl.videoedit.iwallpapers 100.000 မတ်လ 20 2020
ဗီဒီယိုကိုဖနျဆငျး com.androidapp.videosedit.v 100.000 ဧပြီလ32020
ရောင်စုံနောက်ခံပုံများ com.playljj.wallpapercompss 100.000 စက်တင်ဘာလ 26 2019
pedometer com.baidu.news.pedometer 100.000 ဇန်နဝါရီလ 18 2020
အစွမ်းထက်လက်နှိပ်ဓာတ်မီး com.meituan.ybw.flash 100.000 25 ဒီဇင်ဘာ 2019
စူပါတောက်ပသောလက်နှိပ်ဓာတ်မီး com.tqyapp.sb. ဓာတ်မီး 100.000 ဇန်နဝါရီလ 18 2019
စူပါလက်နှိပ်ဓာတ်မီး com.superapp.xincheng 100.000 မတ်လ32020
Solitaire ဂိမ်း com.game.tqsolitaire 100.000 ဧပြီလ 24 2019
QR Code ၏တိကျမှန်ကန်သောစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှု com.tqyapp.qr 50.000 ဖေဖော်ဝါရီလ 20 2019
ဂန္ထဝင်ကဒ်ဂိမ်း com.card.solitaire အသစ် 50.000 မေလ92019
Junk ဖိုင်သန့်ရှင်းရေး com.xdapp. သန့်ရှင်းရေး 50.000 မတ်လ 22 2019
ဒြပ်စင် Z com.tqygame.synthetic 50.000 ဧပြီလ62019
ဖိုင်မှတ်တမ်း Manager ကို com.smt.filemanager 50.000 27 ဒီဇင်ဘာ 2017
ပေါင်းစပ် Z ကို com.game.hcz 50.000 ဧပြီလ 22 2019
Screenshot ရိုက်ကူးခြင်း com.tianqiyang.lww.screenedit 10.00032019 ဇူလိုင်လ
နေ့စဉ် Horoscope နောက်ခံပုံများ com.tianqiyang.lww.constellation 10.000 12 2019 ဇူလိုင်လ
Wuxia စာဖတ်သူ com.wuxia.reader 10.000 မေလ 14 2017
မိုးလေဝသအခြေအနေ com.plus.android.weather 10.000 18 2018 ဇူလိုင်လ
တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှနောက်ခံပုံများ com.tqyapp.chuangtai 100 ဇန်နဝါရီလ 10 2019
iHealth အဆင့်ကောင်တာ com.tiantian.lang.tencent N / A ဇန်နဝါရီလ 18 2019
com.tgyapp.fiction com.tgyapp.fiction N / A ဇန်နဝါရီလ 1 1970
Play Store မှဖျက်လိုက်သည့်မည်သည့် app ကိုမဆိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်သည် ၎င်းကိုထည့်သွင်းထားသည့်စက်၏အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သော်လည်းဂူဂဲလ်ပလေးစတိုး၏ပြင်ပရှိ APK များကိုသိုလှောင်ရုံများမှထည့်သွင်းသည်ကိုသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ဤအသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်ဤအပလီကေးရှင်း ၂၅ ခုအနက်မှ Android တွင်သင်တပ်ဆင်ခြင်းလွဲချော်နေကြောင်းသတိရပါ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤစာရင်းမှအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုကိုတပ်ဆင်ထားကြောင်းတွေ့ရှိပါကမည်သည့်အကြောင်းပြချက်ကြောင့်မဆိုသင်၏ Facebook အကောင့်၏စကားဝှက်ကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ဒါ့အပြင် Two-step authentication ကိုအသုံးပြုသည် ကျွန်ုပ်တို့အကောင့်သည်မလိုအပ်သောလက်ထဲသို့ကျရောက်စေရန်ကျွန်ုပ်တို့လက်တွင်ရှိသောအလုံခြုံဆုံးအစီအမံတစ်ခုဖြစ်သည်။
မြင်နိုင်တဲ့အတိုင်း၊ ဒီအက်ပလီကေးရှင်းတွေမှာ browser မှ login ကိုအသုံးပြုသည် ခလုတ်တစ်ခုကိုထည့်သည့်အခါတရားဝင်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုရန်အကြံပြုသည်၊ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အလွန်အမင်းလေးလံပြီးအရင်းအမြစ်အလွန်အကျွံသုံးစွဲသည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုလူသိများသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏မိုဘိုင်းဖုန်းများတိုးတက်လာခြင်းကြောင့်ဤစနစ်ကိုအလွန်အကျွံအသုံးပြုခြင်းသည်သိသာထင်ရှားခြင်းမရှိချေ။
သင်တပ်ဆင်ထားရှိမရှိကိုစစ်ဆေးရန်အက်ပ် ၂၅ ခုရှိသည် ထို့ကြောင့်သင်၏ Facebook login အထောက်အထားများကိုကာကွယ်ထားပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ယခု Facebook ၀ င်ရောက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များခိုးယူသောဤ Android အက်ပလီကေးရှင်း ၂၅ ခုကိုဖယ်ရှားပါ
Android သည် Galaxy Tab A 10.1 နှင့် Galaxy Tab A 8.0 တက်ဘလက်များပေါ်တွင်စတင်ရောက်ရှိခဲ့သည်